Zlatan Ibrahimovic Oo Iskaga Baxay Hutelka Ay Manchester Degto Ee Lowry Hotel Isaga Oo U Wareegay Hutel Kale Oo Ay Man City Isticmaasho Iyo Sabbata Oo Faah Faahsan - Wargane News
Home Sports Zlatan Ibrahimovic Oo Iskaga Baxay Hutelka Ay Manchester Degto Ee Lowry Hotel...
Magaalada Manchester ayaa laba u qaybsan, qayb casaan ah oo ay Man United iyo jamaahiirteedu ku caan yihiin iyo qaybta kale oo Blue ah isla markaana ay Manchester City iyo jamaahiirteedu ku caweeyaan. Laakiin saxiixa cusub ee Zlatan Ibrahimovic ayaa go’aansaday in uu ka gudbo khadka cagaaran ee udhexeeya labada kooxood ee dariska ah isla markaana uu dego hutel ay Manchester City si joogto ah u isticmaasho isaga oo ka baxay hutelka ay Man United sida joogtada ah u degto.
Gool dhaliyaha ree Sweden ee Zlatan Ibrahimovic iyo qoyskiisa ayaa ka guuray Lowry Hotel oo ah hutal shan xidigle ah oo ay waqti dheer soo isticmaali jirtay kooxdiisa Manchester United, wuxuuna u guuray hutelka kale ee Radisson Blu oo ay Manchester City si joogto ah u degto.
Zlatan Ibrahimovic ayaa hal sabab ah uga guuray Lowry Hotel isla markaana ku doortay Radisson Blu taas oo ah in hutalka ay kooxdiisu degto ee Lowry Hotel aanu lahayn barkada lagu dabaasho. Wuxuuna doortay in isaga iyo qoyskiisu ay degaan Radisson Blue halkaas oo uu ka heli karo barkad uu ku dabaasho.
Saxaafada dalka Ingiriiska ayaa si wayn wax uga qortay in Zlatan Ibrahimovic iyo qoyskiisu ay u guureen Radisson Blu Hotel isla markaana ay ka baxeen Lowry Hotel oo looga bartay in ciyaartoyda kooxda Man United ay si joogto ah u degaan .
Ibrahimovic ayaa xabaantiisa ka xidh xidhay Lowry Hotel si uu u helo barkad uu ku dabaasho waxayna xaaskiisa Helena iyo caruurtiisu ay hadda degeen Radisson Blu Hotel oo hore looga bartay in ay degaan ciyaartoyda kooxda Manchester City oo ay Manchester United si wayn u xifiltamaan.
Ibrahimovic ayaa kulankiisii ugu horeeyay ee Man United ku dhaliyay goolkiisii ugu horeeyay ee Red Devils kulankii saaxiibtinimo ee xalay kooxaha Man United iyo Galatasaray ku dhex maray dalka Sweden.